त्रि.वि रजिष्ट्रारले किर्तिपुरबाट बाट एका विहानै किन बेलुन उडाए ? – ToplineKhabar
त्रि.वि रजिष्ट्रारले किर्तिपुरबाट बाट एका विहानै किन बेलुन उडाए ?
June 20, 2018 June 21, 2018 प्रदीप भट्ट0Comment
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको सहकार्यमा बुधबार मौसमी बेलुन उडाइएको छ । मौसमी जानकारी लिनको लागि प्रत्येक दिन विहान ५बजे किर्तिपुरबाट बेलुन उडाउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागकामहानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले जानकारी दिए ।
बेलुन १९ किलोमिटरमाथि आकाशमा पुगी बिहान सवा ८ बजे सुन्दरीजल आसपासमा खसेको थियो । हाइड्रोजन ग्यास भरिएको यस्ता बेलुन माथि बढ्दै जाँदा न्यून हावाको चापका कारण फुक्दै जाने र एउटा उचाइमा पुगेपछि फुट्ने गर्छ ।
बेलुन झर्दा त्यसमा झुण्ड्याइएको प्यारासुटको माध्यमबाट विस्तारै झर्ने हुँदा जोखिम अत्यन्त कम हुन्छ । यसरी प्रयोग भइसकेका बेलुन कसैले फेला पारेमा विभागमा पुर्‍याइदिन वा सम्पर्क गर्न जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ ।
यससम्बन्धी सूचना उडाइएको उपकरणमा टाँस गरिएको विभागले जनाएको छ । माथिल्लो वायुमण्डलको मौसमी सूचना मौसम पूर्वानुमानका लागि यस्तो बेलुन उपयोगी हुने र पूर्वानुमान अझ भरपर्दो हुने विश्वास विभागले लिएको छ ।
बुधबारको मौसमी बेलुनको उडानको शुभारम्भ त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा ऋषिराम शर्माले संयुक्तरुपमा गरेका थिए ।
← रोनाल्डोको गोलमा पोर्चुगल विजयी, मोरक्को बाहिरियो
ठमेलबाट ६ जना पाकिस्तानी पक्राउ →
भरतपुरमा पुन: मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय
June 3, 2017 प्रदीप भट्ट 0
दाङमा एक महिलाको हत्या
श्रीलंका टापुमा बिजुली पुग्यो
September 5, 2016 toplinekhabar 0